22Bet Kunyoresa - Maitiro Ekugadzira Iyo Itsva 22BET Akaunti?
Sei Kunyoresa pa22bet?
22Bet Register neSocial Network
22Bet Kunyoresa neE-Mail
22Bet Kunyoresa nefoni
GUIDE YE 2022
Kurumidza Matanho Kunyoresa pa22Bet
Kunyoresa, unofanira kudzvanya paRegista bhatani, iyo inoratidzirwa neruvara rwayo rwegirinhi rwakajeka kumusoro, pedyo nekona yekurudyi.
Imwe nzira iri kubva kubhatani rine label yakafanana – Register, pazasi pebheti slip kurudyi rwepeji.
Kana ukangovhura peji rekunyoresa, unofanirwa kuzadza minda yese inodiwa kuti ukwanise kupedzisa kunyoresa maitiro.
Iwe unogona kusarudza pakati pekunyoresa kuzere uye kunyoreswa kuburikidza nesocial network kana vatumwa.
Nemhando ipi yekunyoresa, iwe unofanirwa kubvumirana nematemu ekushandisa pakupedzisira kuti upedze uye ugadzire account ne22Bet.
Sei Kunyoresa ne22Bet?
Kunyoresa pawebhusaiti yebhuki kunounza zvakanakira zvakakwana, izvo zvatichasimbisa pazasi. Ruzivo rwakadzama nezvezvikamu harugone kutariswa nevashandisi vasina kunyoreswa.
Pakunyoresa uye mushure mekuita dhipoziti yekutanga, mutengi mutsva wese anogamuchira bhonasi ye 100% pamari yedhipoziti. Unogona kusarudza pakati pebhonasi yechikamu cheMitambo, uye bhonasi yeCasino chikamu.
Nzvimbo iyi ine live chat, kuburikidza iyo iwe unogona kubvunza mibvunzo kuvashandi vekutsigira vari pabasa chero nguva.
Iyo saiti inotsigira shanduro mu 60 mitauro
Iyo 22Bet kasino ine muunganidzwa wemitambo kubva kune vakawanda vakasiyana vanogadzira, uye rondedzero iri kuramba ichiwedzerwa kwairi. Izvi zvinovimbisa siyana kune vatambi.
Iyo saiti inopa yakanakira mobile vhezheni, pamwe chete nemaapuro maviri enhare – yeIOS uye yeAroid.
22Bet Kunyoresa – A Detailed Guide
Mushure mekudzvanya bhatani reRegista, iyo yakazara yekunyoresa sarudzo inovhura. Kubva pane chinongedzo chiri kumusoro kurudyi iwe unogona kusarudza kunyoresa kuburikidza nesocial network kana messenger, uye kubva pane chinongedzo chiri kumusoro kuruboshwe unogona kudzokera kune yakazara kunyoresa sarudzo.
Gadzira Akaundi kuburikidza neSocial Network kana Messenger
Iyo ipfupi yekunyoresa sarudzo ndeye pasocial network kana messenger. Asi network idzi dzinozivikanwa uye dzinoshandiswa kunyanya muRussia. Ava, iyo Google Plus network inoshandiswawo zvakanyanya kunze kweRussia.
Pano iwe unongoda kusarudza mari chete, nyika uye social network, wobva wabvumirana neMitemo neMamiriro ebhubhuki kuti upedze kunyoresa.
Asi avo vanosarudza nzira iyi yekunyoresa vanofanira kuyeuka kuti vachatozozadzisawo ruzivo rwavo gare gare, sevatengi vanoenda kuburikidza nesarudzo yakazara.
22BET KUBHESA NESOCIAL NETWORK
Kugadzira 22Bet Account ine Full Registration – Mbichana mbichana
Muhwindo rekunyoresa rakazara rinovhurwa mushure mekudzvanya bhatani rekunyoresa, iwe unofanirwa kuzadza data rako pachako sezvinotevera:
Tanga zadza kero yeemail yauchashandisa mu22Bet.
Chepiri, zadza zita rako.
Chetatu, zadza zita rako rekupedzisira.
Chechina, zadza password yauchashandisa pane saiti.
Cheshanu, sarudza nyika yauri kushandisa saiti kubva. Iyo system inoona kuti unobva kunyika ipi. Menyu yekudonhedza-pasi inoshandiswa kusarudza imwe nyika.
Chetanhatu, sarudza mari yauchashandisa. Iyo system inosarudza otomatiki kubva kwaunogara, asi iwe unogona kusarudza imwe mari kubva pane yekudonha-pasi menyu.
Chenomwe, iwe unofanirwa kukanda bhokisi pamberi pekuzivisa kuti unobvuma Mitemo neMamiriro emubhuki.
Chesere, chaunofanirwa kuita kudzvanya pane yakasvibira REGISTER bhatani kuti upedze kunyoresa.
22BET KUBHOSA NEE-MAIL
Kujekeswa kwakakosha uye Mitemo ye22Bet Kunyoresa
– Zvakakosha kuti iwe uise kero yeemail iripo nekuti iyi ichashandiswa kuti timu yerutsigiro ibate newe. Kana email yako isiri yemazuva ano, haugone kugamuchira chinongedzo chekusimbisa kunyoresa kwako kana kugamuchira zviziviso, zvakadai semabhonasi emazuva ano kana anouya uye mamwe mashoko anokosha.
– Kana uchinge wapedza iyo yakazara kunyoresa maitiro, hwindo rinovhurika pauchaona kodhi ine manhamba mapfumbamwe. Iri ndiro zita rako rekushandisa resaiti. Iwe uchaonawo bhokisi rekuisa password yako.
– Mukati 72 maawa, iwe unofanirwa kusimbisa kunyoresa kwako kuburikidza nekubatanidza kwauchagamuchira kuburikidza neemail.
– Unogona kunyora pasi kodhi, ndiro zita rako rekushandisa resaiti, asi iwe unogona zvakare kupinda muakaundi yako nekero yako yeemail.
– Mushure mekunyoresa, unofanirwa kutsanangura kuti ndeipi bhonasi yekugamuchira yaunoda kushandisa – yechikamu cheMitambo kana chikamu cheCasino, kana kuzivisa kuti haudi kushandisa chero mabhonasi.
Chengetedzo PaKunyoresa uye Uchishandisa Saiti
Kupinza data rako pachako, kutumira kopi yegwaro rekusimbisa uye kushandisa nzira dzekubhadhara mu22Bet dzakachengetedzwa zvizere. Iyo bookmaker inopihwa rezinesi neCuracao Gambling Authorities. Nhamba yerezinesi ndeye 8048/JAZ. Yakabudiswa muna Mbudzi 16, 2018 uye inoshanda kusvika munaNovember 28, 2023.
22Bet Kunyoresa kuburikidza nenharembozha
Paunonyoresa kuburikidza nenharembozha yesaiti kana nemaapps, nzira yacho yakafanana, nechisarudzo cheimwe yemhando mbiri dzekunyoresa.
– Iyo yakazara vhezheni inodawo kusimbiswa kwekunyoresa kuburikidza nekubatanidza mukati 72 maawa.
– Paunenge uchinyoresa uchishandisa nharembozha, hauzokwanisi kushandisa shanduro yeChirungu. Fomu rekunyoresa rakaiswa muChirungu.
22BET KUBHEREGWA NEFONONI
Verification inzira inoshandiswa nevese mabhukimaki epamhepo kuratidza kuzivikanwa kwevatengi. Imwe nguva mushure mekunyoresa, iwe uchakumbirwa kuti utarise ruzivo rwako pachako uchishandisa ID gwaro. Heino mashandiro anoita maitiro.
Ndinosimbisa sei pa22Bet?
Paunenge wagadzira account kuburikidza nekunyoresa kwakabudirira, unofanira kuzadza mamwe mashoko emunhu mariri. Izvi zvinosanganisira:
– zuva rako rekuzvarwa;
– nhevedzano yechitupa chako inogamuchirwa nabhuki (Chitupa kana pasipoti);
– ID nhamba yako;
– idunhu nenharaunda yaunogara.
Kuongororwa negwaro kunoitwa mushure mekufona kubva kuna bookmaker. Inotumirwa kuaccount pane webhusaiti. Iwe unofanirwa kutumira makopi akaongororwa kana mafoto ezvinyorwa zvechitupa chako kuti usimbise ruzivo rwemunhu rwakaiswa pakunyoreswa. Makopi kana mapikicha anotumirwa neemail.
Paunenge Wakumbirwa Kuti Uone Yako 22Bet Account, Unofanira Kuita Zvinotevera:
– Tumira kopi (scan kana mufananidzo) yegwaro reID kuchikwata chebhubhuki
pamagwaro akaita sechitupa unofanira kuita makopi emativi ose egwaro racho.
– 22Kubheja kazhinji kunoda maitiro aya usati wapa chikumbiro chekubvisa.
Verification for Bank Transfers
Kana kutengeserana kuchizoitwa nebhangi transfer, bookmaker ine zvinotevera zvimwe zvinodiwa:
– Kana ukashandisa kadhi rechikwereti, unofanira kuita makopi emativi maviri ekadhi. Reverse side inofanirwa kunge iine siginicha yako.
– Iwe unofanirwa kutumira kopi yegwaro repamutemo rinoratidza kero yako yeposi kana kero yakasiyana nekero yako yekusingaperi paID yako.
– Iyo bookmaker inogona kuda mamwe magwaro pakufunga kwayo.
Verification yeE-wallet Withdrawals
Kune rudzi urwu rwekubvisa, 22Kubheja kungangoda mamwe magwaro kana mari yekutengeserana ikadarika imwe muganhu
Kunyoresa pawebhusaiti ye22Bet kuri nyore. Zadza zvese zvese mushure mekusarudza nzira yekunyoresa. Kunyoresa kuzere kunodiwa, senzira yekudimbudzira, kuburikidza nesocial network kana messenger, hazvikuponese kubva pakuisa izvi zvinhu zvishoma gare gare.
Zvakakosha kusarudza bhonasi, ingave yechikamu chemitambo kana kasino, mushure mekunyoresa kuti mukwanise kutora mukana wemari yekukurudzira. Zadzisa mitemo ine chekuita nekushandiswa kwemari yebhonasi, uye mamwe mabhonasi akakumirira iwe, pamwe chete nemitambo yakasiyana-siyana yemitambo uye mitambo yekasino, sevatengi vakanyoreswa kare vebhukabhuki.